Muqdisho: Dadaalo lagu doonayo in Militariga looga saaro magaa... | Universal Somali TV
Muqdisho: Dadaalo lagu doonayo in Militariga looga saaro magaalada oo socdo
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socdo dadaalo lagu doonayo in Ciidanka Xoogga Dalka looga saaro magaalada. Ciidamada ayaa daba-yaaqadii bishii April soo baneeyay fariisimihii ay ku kala lahaayen Gobolka Shabellaha Hoose & Shabellaha Dhexe.
Ciidamadan ayaa si weyn uga horyimid tallaabadii uu Golaha Shacabka muddo kororsiga ugu sameeyay Hay'adaha Dowladda Federaalka.
Ciidamadu waxay haatan ku kala sugan qaybo ka mida Degmooyinka Hodan, Yaaqshiid iyo Kaaraan, iyadoo ciidanka ku sugan Degmada Hodan ay ka tirsan yihiin Guutada 7aad ee Qaybta 60aad, halka kuwa ku sugan Waqooyiga Muqdisho ay ka tirsan yihiin Guutada 4aad ee Qaybta 27aad.
Ciidamada soo baneeyay fariisimihii ay ku lahaayen Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa waxaa horkacaya Saraakiil uu ka mid yahay Taliyaha Guutada 4aad ee Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, Korneyl Saney Cabdulle Gaab.
Sidoo kale Faarax Xasan Xaashi iyo Liibaan Madaxweyne ayaa horkacaya Ciidanka Guutada 7aad ee Qaybta 60aad oo soo faruujiyay saldhigii ay ku lahaayen deegaanka Leego ee Gobolka Shabellaha Hoose. Ciidankan ayaa gurmad ugu yimid Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ka dib markii hoygiisa oo ku yaala Degmada Hodan ay weerareen Xoogaga Haramcad iyo Booliska Gobolka Banaadir, waxaana la fahamsan yahay inay ka hortaggeen hawlgalkii ay Dowladda Federaalka ku dooneysay in lagu soo xiro siyaasigaasi.
Wakiilka Midowga Yurub ee Somaliya, Amb. Nicolas Berlanga oo xoojinaya baaqii Ra'iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ahaa in ciidamada ay dib ugu laabtaan xeryahooda ayaa ku baaqay in ciidamada laga saaro Caasimadda Muqdisho.
Wakiilka ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Muqdisho oo lagu kala qaybiyo ciidamo ka baxsan qadka Taliska aanay caawinayn shacabka Soomaaliyeed.
Nicolas Berlanga ayaa soo jeediyay in cid kasta oo dooneysa in kaalin ka qaadato hannaanka doorashooyinka ee dalka ay tahay inay Ra'iisal Wasaare Rooble ku taageerto shaqada uu wado.
Sidoo kale Odayaasha Dhaqanka iyo Waxgaradka Magaalada Muqdisho ayaa wada dadaalo Ciidamada Militariga looga saarayo magaalada, iyagoona garabka mucaaradka ku cadaadinaya in ay ciidamadu baneeyaan goobaha ay dhufeysyada ka sameysteen.
Saraakiisha Ciidamada Militariga ayaa mar sii horeysay sheegay inaanay dib ugu laaban doonin xeryahooda, illaa iyo inta uu ka furmayo shirka wadatashiga qaran, ee lagu dhameystirayo doorashooyinka dalka.
Kan-xigaRooble oo magacaabay Wasiirka Shaqada...
Kan-horeMadaxweyne Farmaajo oo la kulmay Mada...
60,851,378 unique visits